iPhone အတွက် application များ အိုင်ဖုန်းသတင်း
App Store တွင်ထောင်နှင့်ချီသော application များရှိသည် ပြီးတော့သင်ရှာဖွေနေတဲ့အရာနဲ့ကိုက်ညီမယ့်သူကိုရှာရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ Actualidad iPhone မှာမင်းကိုနေ့တိုင်းသင်ပေးတယ် အကောင်းဆုံး applications များ သူတို့က Apple ဖုန်းကိုများအတွက်ဖြန့်ချိကြသည်။ သင်၏အိုင်ဖုန်းကိုသင်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်သင်အမြဲအံ့အားသင့်သွားစေရန်သင့်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနှင့်အသစ်သောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ The ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း လျှောက်လွှာ၏ဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးကိုသင်သိရှိနိုင်ရန်သူတို့သည်နက်ရှိုင်းစွာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသွားလိမ့်မည်။
သင့် iPhone အတွက် application ကိုစတင်ဒေါင်းလုပ်ချပါ
သင်အနည်းငယ်ပျောက်ဆုံးပြီး App Store တွင်အသစ်ဖြစ်နေလျှင်သင်၏ iPhone သို့သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအခမဲ့နှင့်ငွေပေးချေသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများမှာဒီမှာ။
ယခင်ရွေးချယ်မှုဖြင့်သင်ရရှိလိမ့်မည် သင့်ရဲ့ iPhone ကို applications များနှင့်ဖြည့်ပါ အသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း။
Apple သည် developer များအား ၎င်းတို့၏ စာရင်းသွင်းမှုများအား ကန့်သတ်ချက်အချို့ဖြင့် စျေးနှုန်းမြှင့်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ မေ့နေပြီဖြစ်သော်လည်း လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်က App Store သို့မဟုတ် မည်သည့်အက်ပ်စတိုးမှ မရှိခဲ့ပါ။ ဒီနေ့…
WhatsApp သည် သင့်အား အခြားအသုံးပြုသူများကို အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ အဖွဲ့များမှ ထွက်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ပေါင်း .
လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်က WhatsApp သည် ၎င်း၏အက်ပ်လီကေးရှင်း၏ beta ဗားရှင်းတွင် ရှာဖွေမှုစစ်ထုတ်မှုများကို ပေါင်းစည်းထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိခဲ့ရသည်...
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ပေါင်း .
WhatsApp သည် ၎င်း၏ beta ရှိ ရှာဖွေမှုများတွင် စစ်ထုတ်မှုများကို စတင်စမ်းသပ်နေပြီဖြစ်သည်။
WhatsApp beta များကို အဆက်မပြတ် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က ကွန်မြူနတီများက တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်...
Apple Watch အတွက် NapBot သည် အိပ်နေစဉ် အသက်ရှူကျပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ဖြည့်စွက်ချက်နှင့်အတူ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။
por Karim Hmeidan လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
Apple Watch ကဲ့သို့ စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို စောင့်ကြည့်ရန် အများအပြား ပြောဆိုနေကြပြီဖြစ်သည်။
Telegram သည် Premium စာရင်းသွင်းမှုအောက်တွင် သီးသန့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
စာတိုပေးပို့ခြင်း အပလီကေးရှင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်များတွင် နေ့စဉ် မုန့်များဖြစ်သည်။ ပိုများလာတာနဲ့အမျှ သူတို့ဟာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်...
WhatsApp သည် သင့်အား ချက်တင်ဗန်းမှ အခြေအနေများကို မကြာမီ မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
WhatsApp စက်က ဆီထည့်တာထက် ပိုပါတယ်။ အသစ်အဆန်းတွေဟာ လတိုင်း လတိုင်း ဆက်သွားနေပြီး အားလုံးက အတူတူပါပဲ...
သင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad တွင် 1Password 8 အများသူငှာ စမ်းသပ်ဆော့ဖ်ဝဲကို ဝင်ရောက်နည်း
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
1Password သည် ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းအတွက် ယနေ့အထိ အကြီးမားဆုံး အပ်ဒိတ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း ယမန်နေ့က သင့်အား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းဖြစ်သည်…
မယုံနိုင်စရာ 1Password 8 အပ်ဒိတ်ကို အများသူငှာ စမ်းသပ်ဆော့ဖ်ဝဲတွင် ရနိုင်ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်လုံခြုံရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန်...
WhatsApp တွင် အသစ်အဆန်းများ- ကွန်မြူနတီများ၊2GB အထိ ဖိုင်များနှင့် အခြားအရာများ
WhatsApp သည် သုံးစွဲသူအများစု၏နေ့စဉ်အသုံးအများဆုံးအက်ပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီလများအတွင်းက…
WhatsApp ကိုရုပ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုသင့် reel သို့မသိမ်းဆည်းပါနှင့်
အားလုံး Telegram အတွက်လုပ်ကွက်တွေအကြောင်း
ကျွန်တော့်ကို Instagram မှာဘယ်သူဖွင့်ထားသလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
Pordede အက်ပလီကေးရှင်း (ယခု Plusdede) သည် App Store သို့ခိုးဝင်သွားသည်
reel မှဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Instagram ဇာတ်လမ်းသို့မည်သို့ထည့်ရမည်နည်း
iPhone ဗွီဒီယိုများကို iPhone ဖြင့် MP3 ဖြင့်ပြောင်းနည်း
"ဟေ့ Siri" ကမင်းအတွက်အလုပ်မဖြစ်ဘူးလား။ ဒီဖြေရှင်းချက်များကိုစမ်းကြည့်ပါ
အက်ပလီကေးရှင်းများကို .ipa format ဖြင့်ထည့်ပါ
Apple Store အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့် Afterlight ကိုအခမဲ့ရယူပါ။ ဘယ်လိုပုံပြလဲ
လုပ်ငန်းအသွားအလာ - ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါဘာလုပ်လို့ရလဲ